N'etiti Anyị Hacks ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
N’etiti Anyị Hacks
Chọpụta onye na-enyo enyo ngwa ngwa karịa ọtụtụ, ma ọ bụ gbuo otu otu na-enweghị ịkpalite mkpu - N'etiti Anyị Coco emeela ụzọ gaa Gamepron!
Boughtzụọla otu n'ime Anyị Hack? Chọta usoro ndị ọzọ ebe a
Biko rụba ama: Tupu ịzụrụ anyị n'etiti anyị hacks, dị njikere na ngwá ọrụ ị na-achọ ịzụta ka emelitere nso nso a ma ọ bụ ka dị n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na anyị na-emelite ngwaọrụ anyị oge niile, ọ na-egbu oge n'oge nnyefe n'ọnọdụ ụfọdụ; mgbe ọ na-abụkarị ozigbo, ọ nwekwara ike were awa ole na ole. Ngwaọrụ anyị niile akpọchiri HWID, nke pụtara na ị ga - eji ha naanị n'otu kọmputa - gbaa mbọ hụ na kọmputa gị dakọtara na ngwaọrụ anyị niile tupu oge eruo. Agaghị enye nkwụghachi ụgwọ ọ bụla ozugbo ilele igodo ngwaahịa ahụ!
Ndi A Huru Anyi N’etiti Anyị Hacks
N'etiti Anyị Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & More
Coco mbanye anataghị ikike
ịzụta N’etiti Anyị Hacks na 4 nzọụkwụ
Họrọ otu egwuregwu ị chọrọ igwu site na oke nhọrọ anyị
Buru mbanye anataghị ikike nke gụnyere atụmatụ niile ịchọrọ iji chịkwaa asọmpi ahụ!
Ozugbo ị họrọ mbanye anataghị ikike, ime ka ịkwụ ụgwọ gị iji nanị 100% ala ịkwụ ụgwọ nhọrọ
Mgbe ịzụrụ isi ngwaahịa gị ị nwere ike iji ya budata n'etiti anyị Coco ozugbo!
Gịnị mere Gamepron n'etiti anyị hacks
Gamepron ejirila mpako na àgwà nke mbipụta anyị mgbe niile, yana n'etiti anyị Coco agaghị abụ otu. Ọ bụrụ n’ịchọta ngwa ọrụ dị ebe a, nsogbu ga - abụ ngwa ọrụ kachasị mma etolitere maka egwuregwu ahụ - naanị anyị na - arụ ọrụ kacha mma na ndị mmepe gburugburu iji hụ na a na - ezute ọkọlọtọ anyị. A gaghị enye gị ngwá ọrụ na-enweghị isi ọ bụrụ na ịzụta igodo ngwaahịa sitere na Gamepron, ị nweghịkwa ịrara onwe gị nye otu nhọrọ! Anyị na-enye gị atụmatụ niile (yana ụfọdụ) mkpa iji merie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu ọ bụla n'ime Otu n'ime anyị nke ị na-egwu, nke bụ ihe akaebe banyere ike nke Otu Anyị Coco.
A hụbeghị ụdị atụmatụ a n'ime otu anyị tupu oge a, anyị na-achọkwa mgbe niile ụzọ iji tinyekwuo. Kpọghee ekwt niile nke ihe dị na-egwuregwu na-eme ka gị agwa dị ka a seasoned pro, ma ọ bụ ị pụrụ ọbụna nwee “egbu egbu Mod” na-egosi ebe Killer na-emi odude mgbe niile! Site na ọnụahịa ezi uche dị na ya, ọtụtụ nhọrọ oge dị iche iche, yana atụmatụ kachasị dị na mbụ n'etiti mbanye anataghị ikike, anyị na-eche n'ezie na Gamepron zuru oke maka onye ọ bụla.
N'etiti Anyị Coco e mepụtara iji nyere ndị na-eme egwuregwu novice aka inweta nnukwu ihe na-enweghị ọrụ niile ha na-arụ, na-enyekwa ndị egwuregwu asọmpi aka ịchekwa "ihu" ha. Ọ dịghị onye na-enwe mmasị itufu na egwuregwu vidio, ọbụlagodi nke na-achọ maka nsogbu na ịme ihe mgbe ụfọdụ! Gamepron nọgidere na-enwe mmekọrịta siri ike ya na ndị mmekọ mmepe anyị niile, ya mere, anyị maara ihe anyị ga-atụ anya n'aka ha n'oge a. Nke a bụkwa ihe mere anyị ji enwe ike ijide mmelite ọ bụla ma ọ bụ ndozi ọ bụla enwere ike ime n'etiti anyị, na-enye ndị mmepe ohere ime mgbanwe na ịtọhapụ patches iji nyere ndị ọrụ Gamepron aka.
Ugbu a ọrụ nke Otu Anyị Coco mbanye anataghị ikike nwere ihe ọ bụla ma nti ihe na-ekwu banyere ndị aghụghọ, nke bụ a kpọmkwem n'ihi anyị raara onwe anyị nye mma. You na-agaghị achọpụta glitches ma ọ bụ nwee nsogbu na ukpụhọde mbanye anataghị ikike ntọala, ihe niile e-egbu maramara iji hụ na a ezigbo (na nti!) Onye ọrụ ahụmahụ. Ma ị bụ onye nduhie ma ọ bụ akụkụ nke ndị ọrụ, iji N'ime anyị Coco ga - enyere gị aka ị nweta ogo nke ịdị ukwuu dịka ọ dịtụbeghị. Nọrọ mma (ma dị ize ndụ!) Site na ịzụta gị Otu hacks si Gamepron, na # 1 isi maka hacks online.
N'etiti Anyị Gosi onye na-egbu egbu mod
N'etiti Anyị Player ozi ESP
N'etiti Anyị Gosoo mmuo
N'etiti Anyị Ghost ọhụụ
N'etiti Anyị mee gị aghụghọ
N'etiti Anyị ọsọ ọsọ
N'etiti Anyị ihe aga-eme dechara dị ka aghụghọ
N'etiti Anyị enweghi ngwụcha sabotaji
Ezigbo N’etiti Anyị Hack atụmatụ
N'etiti Anyị Coco Player ESP
Iji njirimara ESP na-egwu egwu ga-enye gị ohere ịnweta nlele dum nke eserese! Hụ egwuregwu ọ bụla n'ime egwuregwu na-eji Gamepron.
N'etiti Anyị Coco Player ozi ESP (Aha, anya)
Hụ ozi ọkpụkpọ (dị ka aha ha na ebe dị anya) nwere ike ịba uru bara ụba mgbe ị na-egwu n'etiti anyị! Ma ndị Killer na ndị ọrụ nwere ike iku ume ugbu a.
N'etiti Anyị Coco Ghost Vision
Hụ ebe mmụọ niile na-ezo site na ime ka otu n'ime Anyị Coco Ghost Vision mod. Hụ ebe ihe egwu dị ma zere ya!
N'etiti Anyị Coco enweghi ngwụcha sabotage
Sabotage na uche site na ime ka Otu Anyị Coco Infinite Sabotage featuring, na-enye gị ohere iji merie n'agbanyeghị ihe egwuregwu ndị ọzọ na-eme.
N'etiti Anyị Coco Adị Mod
Jiri N'etiti Anyị Coco Impostor Mod iji hụ na ị bụ onye ndu na oge ọ bụla! Jikwaa egwuregwu site na mbido site na iji N’etiti Anyị Coco.
N'etiti Anyị Coco igbu Cooldown Mod
Ebe nchekwa Kill Cooldown nwere ike ịbụ nsogbu maka ọtụtụ ihe, mana ị nwere ike wepu ya ebe a na Gamepron - ọ nweghị onye nwere ike ịkwụsị gị ugbu a!
N’etiti Anyị Gosi Ghost Mod
Gosi ma egbu egbu na Ghosts na-eji ihe ịtụnanya n’etiti anyị Coco Show Mod, naanị dị ebe a na Gamepron! Ọ dịghị mkpa ịzobe ọzọ
Otu n'ime anyị Ọrụ Coco Mod
Nwere ike ịhọrọ ịrụcha ọrụ dị ka onye nduhie (ma ghọgbuo ụzọ gị iji merie), ọ bụrụhaala na ị bụ onye nnabata.
N'etiti Anyị Coco Speed ​​Boost
Oge bụ ihe kacha mkpa, yabụ chekwaa karịa ya site na ị na-akwado atụmatụ Dị n’etiti Anyị Coco Speed ​​Boost. Gbaa ọsọ site na ọrụ!
N'etiti Anyị Coco Gbanyụọ Nkata Oge
Ghara igbu oge nkata ga-enye gị ohere ịme ngwa ngwa dị ka Onye nduhie, ma gbochie ndị ọrụ ahụ ịkparịta ụka nke ọma dịka ha ga - eme.
O siri ike itinye otu esi mbanye anataghị ikike a n'ime okwu, mana anyị ga-anwale ọ bụla - nke a bụ ego kacha mma onye ọ bụla n'ime anyị nwere ike iji. Ọ bụrụ na ị jọgburu onwe gị na ịgha ụgha ma ghara imeri n’etiti Anyị ụzọ ọdịnala, gịnị ma ị na-echigharịkwuru ndị aghụghọ? Na ngwụsị nke ụbọchị, egwuregwu na-atọ ụtọ, ma iji otu n'ime anyị Coco nwere ike inye aka na nke ahụ.
Ewu ewu n'etiti anyị Hacks na Ndị aghụghọ
N'etiti Anyị Task Mods
N'etiti Anyị Ghost Vision
N'etiti Anyị Speed ​​Boost
Ndị ọzọ n'etiti anyị Hacks na Cheats
Ewu ewu n'etiti anyị Coco Hacks na Ndị aghụghọ
Otu n'ime anyị bụ ihe na-agụ agụụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2020, nke ahụ dịkwa ịtụnanya mgbe ị tụlere na ewepụtara ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2 gara aga. Ugbu a ndị mmadụ mechara chọpụta egwuregwu a dị ịtụnanya, ha na-agakwuru ya dị ka atụrụ - naanị otu nsogbu dị na nke ahụ nwere "ọsụsọ" ole na ole n'ime ngwakọta ahụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ikpori ndụ, ị nweghị ike ịme ya ma ọ bụrụ na ndị asọmpi egwuregwu na-asọ asọ n'akụkụ ọ bụla, mana iji N'etiti Anyị Coco nwere ike idozi ya! Iji N’etiti Anyị Coco nweta uru dị ire maka ọkpụkpọ ọ bụla, ọ bụghị naanị ndị bịara ọhụrụ; ọbụna ndị nwere ahụmahụ n'etiti anyị ndị egwuregwu ga-emeri karịa na aghụghọ a enyere (anyị na-ekwe nkwa ya).
Gamepron bụ ebe obibi ndị kachasị ewu ewu n'etiti anyị na ndị aghụghọ dị na weebụ, yabụ nweere onwe gị ilegharị anya wee hụ ihe anyị ga-enye. Ọ bụrụ na ị ga-aghọ aghụghọ ma ọlị, jiri Gamepron.
Gosi ndị ọrụ ị na-arụsi ọrụ ike dị ka onye nduhie, ma ọ bụ nke ọzọ, na-eji Mod Coco Task Mod Us Us. Nwere ike ịgbanwe ọnụọgụ ọrụ e mechara (ma ọ bụ mkpa ịdị) maka otu ọ bụla, naanị ihe achọrọ bụ na ị bụ onye ọbịa nke egwuregwu gị. Ọ bụrụ n ’ọ bụghị onye nnabata ahụ, ịnweghị ike ịhazị netwọkụ na ntọala ndị ahịa otu a, yabụ ịgaghị enwe ike iji Mods ndị a na-akpọ Coco Task Mods Ọ bara ezigbo uru maka mgbe ị na-anwa ị nweta mmeri ngwa ngwa ma ọ bụ chọọ ka egbu egbu / onye ndu na-eche na ha na-efunahụ oge dị oke ọnụ ahịa. Ihe ọ bụla ị nwere ike ime iji nwee ike site na otu egwuregwu wee banye nke na-esote ga-enwe mmetụta bara uru, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe otu n'ime anyị Coco mbanye anataghị ikike na-enye gị ohere ime Task Mods.
Ndị egwuregwu ọhụrụ na ndị nwere ọhụụ nwere ike irite uru na nke a, ebe ọ bụ na ihe niile ọ na-eme na-ebelata oge ị na-eji eme obere ọrụ.
Ghost Vision ga-enye ndị otu aka ohere ịhụ ebe mmụọ dị, nke pụtara na ịkwesighi ịdabere na nkwukọrịta site n'aka ndị otu gị. Ikwesighi inwe igwe okwu mgbe inwetara N’etiti Anyị Coco ka ọ daa! Chọpụta Ghosts ma rịba ama, dịka nke ahụ bụ ebe onye nduhie ahụ gbusịrị tupu - ị nwere ike ịme nhọrọ a ka ị na-egwu egwu ma gbanyụọ ya mgbe ọ bụla ịchọrọ, yabụ na ị gaghị enwerịrị mgbe mmụọ ga-egosi na ihuenyo gị. Ọ bụrụ na ndị otu gị anaghị ekwurịta okwu nke ọma ma ha amalite ịdata dị ka ijiji, oge eruola ka ịgbanwuo mmụọ mmụọ wee hụ ebe a na-eme ihe niile.
Onye nduhie nwere ike ịkwado otu ọnụ ụlọ, ma ọ bụ ọbụna jiri nwayọ na-ahọrọ ndị otu gị. N'ọnọdụ ọ bụla, iji Ghost Vision ga-enye gị ozi niile achọrọ iji mee nguzo ikpeazụ zuru oke, na-enye gị (na ndị otu gị) mmeri na usoro ahụ.
Ọsọ na-egbu na egwuregwu ndị kachasị egwu nke mmadụ maara, nke mere na Speed ​​Boost mod maka anyị n'etiti anyị Coco mbanye anataghị ikike bụ akụkụ dị mkpa. Mgbe ị na-egwu egwu dị ka onye nduhie, iji Speed ​​Boost mod ga-enye gị ohere ịme ngwa ngwa site na arụ ọrụ adịgboroja gị ọsọ ọsọ karịa ka ọ dị na mbụ, yana ịbịakwute ndị ị merụrụ ahụ ọsọ ọsọ - ọ dị mkpa maka onye ọ bụla nke na-achọ ịdị njọ maka ụzọ igbu ha! Mee ka ndị otu na-arụ ọrụ wee jiri ọsọ ọsọ pụọ, ebe ọ bụ na ọ nweghị ụzọ ọ bụla onye ọ bụla ga-esi nwee ike ịnwekọ ntọala egwuregwu ngwaahịa. Ihe aga-eme nwere ike bụrụ akụkụ kachasị nsogbu n’etiti anyị, ebe ọ bụ na ha chọrọ ịdọpụ gị uche (na-etinye gị n’ihe egwu na usoro ahụ), mana ọsọ ọsọ mgbokwasị ga-eme ka nsogbu ndị ahụ bụrụ ihe gara aga.
Nwere ike ịbanye na ọrụ n’enweghị nchegbu, ebe ị ma na ị ga-emezue ha ngwa ngwa.
Ihe ka ọtụtụ n'ime atụmatụ ndị dị na N'ime Anyị Coco bụ iji jeere Onye ndu ahụ, mana enwere ọtụtụ atụmatụ bara uru maka ndị otu. Gbanyụọ "Gbuo Cooldown" wee wepụta ndị ọrụ niile n'otu oge, ma ọ bụ mee ka Sabotage na-enweghị ngwụcha ma kwụsị ndị otu na-arụcha ọrụ ha. Ọtụtụ nhọrọ ga - enyere gị aka ịba ọgaranya ma dịrị ndụ ogologo oge, na - enye gị ohere kacha mma iji nweta mmeri. Mgbe ị bụ onye nduhie, ọ bụ ebe ahụ dum na-aga imegide gị, mana n'agbanyeghị na ị nwere ọnụọgụ dị ka onye otu, ndị nduhie ka nwere uru.
Kpọghee ekwt niile nke ihe gụnyere na egwuregwu na iji nke a aghụghọ! Ikwesighi igho otutu oge nke egwuru egwu iji tinye aka gi na okpu ohuru a, dika iji n'etiti anyi Coco ga-emeghe gi ihe nile - odighi mkpa igwu egwu dika o bu oru ubochi gi!
N'etiti Anyị Hacks ajụjụ
Gịnị mere anyị n'etiti anyị Hacks
Ndị na-egwuri egwu n'etiti anyị ma jiri aghụghọ mee ihe n'oge gara aga maara otú ọ dị mfe ịkwụsị na ịta ahụhụ maka hacking. Iji N’etiti Anyị Coco bụ nkwa
tozọ iji nọrọ na nchekwa, dịka Gamepron na-enye ndị ọrụ anyị ngwaọrụ ndị a na-achọpụtabeghị. Mbanye anataghị ikike na # 1 na-eweta online na na akaụntụ gị (na niile nke gị ọganihu) mma!
Kedu ihe kpatara anyị Ji Agbalite Ọsọ
Ọsọ bụ àgwà bara ezigbo uru inwe mgbe ị na-egwu n'etiti Anyị n'ihi na oge bụ ihe kacha mkpa. Egbula otu sekọnd mgbe ị nwetara Ọrụ Coco Speed ​​Boost na-arụ ọrụ, ha niile nwere ike ịnwe n'enweghị itinye akaụntụ gị n'ihe egwu. Ọ dịkwa mfe iji, nke bụ ego nye ọtụtụ ndị ahịa anyị!
Kedu ihe kpatara anyị N'etiti Anyị Ghost Mod
Ghost Mods na-enye gị ohere ịhụ ebe e gbusịrị ndị otu gị dị ka ndị ọrụ otu, nke nwere ike ịba uru dị ukwuu mgbe ị na-esochi Onye ndu. Nwere ike ile anya ebe ndị otu gị nwụrụ, ọbụnakwa nwee ohere isoro ha kwukọrịta. Ọhụụ zuru ezu bụ akụkụ nke ndị egwuregwu anyị n'etiti anyị kachasị hụ n'anya, anyị nwekwara obi ụtọ na ị ga-enwe ya.
Kedu ihe kpatara anyị Mods Task anyị
Task Mods enwere ike iji belata ọganihu nke otu ndị na-emegide gị, ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole fọdụrụ ma ọ bụ ndị otu niile ka na-agba egwu adịghị mkpa. A ga-etinye Mods Task naanị mgbe ị bụ onye ọbịa, mana ọ bụrụ na ị ga-asụ ngọngọ n'ọnọdụ ahụ, gbaa mbọ hụ na inweela n'etiti anyị Coco kwadebere na njikere ịga!
Gini kpatara anyi ji kparita uka n’etiti anyi
Iji Chat Delayer anyị mgbe ị bụ onye ndu bụ ihe dị mkpa, ebe ọ ga - egbochi ndị ọzọ na - ekwusara ibe ha ozi bara uru. Ọ bụrụ na mmadụ hụ gị ka ị gbue ọkpụkpọ ma ha kụọ Button Button, ị nwere ike igbu oge nkata ahụ ka onye ọ bụla ghara ikwu okwu. Ọ bụrụ na ha enweghị ike ịgbasa asịrị na ị bụ Onye nduhie, kedu ka ị ga-esi funahụ gị?
Etu ibudata ihe kacha mma N’etiti Anyị hacks?
Nchegbu nke ịgbalị ibudata ma wụnye gị n'etiti anyị hacks bụ ihe gara aga, dị ka Gamepron jisiri ike mee ka usoro ahụ dum kwụsị. Kwaghịzi etinye aka na ntinye akwụkwọ ntuziaka, nke na-enye ndị ọrụ ohere izu ike. Agaghị arụ ọrụ mbanye anataghị ikike na ezighi ezi, ebe ọ bụ usoro akpaghị aka nke ejiri aka ya rụọ (ọ dịghị mkpa ka ọ bụrụ geek tech).
Gịnị mere gị Otu hacks dị oké ọnụ karịa ndị ọzọ
You ga-anọrịrị na nchekwa mgbe ị na-eji aghụghọ site na Gamepron, dị ka anyị agaghị anwa anwa itinye aka na hacks. N'etiti Anyị Coco na-egosi nchebe aghụghọ aghụghọ, na-enye gị ohere ịbanye n'enweghị nchekasị nke ịmachibido iwu - enwerekwa ohere ole na ole dị, yabụ na anyị enweghị ike ịhapụ onye ọ bụla chọrọ aghụghọ ndị a ịnweta ha. Nanị na nchekwa bụ ihe kpatara anyị ji akwụ ụgwọ ego.
Gamepron mara maka ijere onye ọrụ ozi kachasị ike anyị, nke ahụ gụnyere ịnye ọtụtụ nhọrọ dị iche iche maka igodo ngwaahịa. Nwere ike ịhọrọ ịzụta ụbọchị 1, izu 1, ma ọ bụ ọbụlagodi igodo ngwaahịa ọnwa, ọ bụ ihe masịrị gị. Chee echiche banyere oge ole ị chọrọ ịnweta aghụghọ na mgbe ahụ ịzụta ihe kwesịrị ekwesị ngwaahịa isi, ọ bụ n'ezie na mfe!
Awesome N’etiti Anyị Hack atụmatụ